Dapoxetine Hydrochloride အမှုန့် (129938-20-1) hplc≥98% | AASraw
Dapoxetine HCL အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင် / Dapoxetine HCL အမှုန့်
SKU: 129938-20-1. အမျိုးအစား: ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Dapoxetine Hydrochloride အမှုန့် (129938-20-1) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Dapoxetine Hydrochloride ယောက်ျားအတွက်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှုများအတွက်စျေးကွက်အတို-သရုပ်ဆောင်ဝတ္ထုရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် (PE) ယောက်ျား၏ 30% အထိအကျိုးသက်ရောက်စေရန်ခန့်မှန်းအသုံးအများဆုံးအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ Dapoxetine Hydrochloride တစ်ဦးရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor အဖြစ်ခွဲခြားကြောင်းတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရည်ညွှန်းစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်နှင့်ဆက်စပ်သောအများအပြား parameters တွေကိုများတွင်တိုးတက်မှုပေးပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်သုတေသနနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာ application များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
Dapoxetine Hydrochloride မေ့ဆေးအမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Dapoxetine Hydrochloride မေ့ဆေးအမှုန့် အခြေခံ ဇာတ်ကောင်
အမည်: Dapoxetine Hydrochloride
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 175-179 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Dapoxetine serotonin reuptake ၏ရွေးချယ် inhibitors ၏အတန်း၏ပေမယ့် Anti-စိတ်ကျရောဂါအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲတစ်ဦးအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအထူးသအောက်ပါစံများအားလုံးဖြည့်ဆည်းသူကို 18 နှင့် 64 ၏အသက်အရွယ်အကြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားအတွက်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့တီထွင်နေသည်:
1 ။ စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်စဉ်အတွင်း, ဒါမှမဟုတ်မကြာမီသွင်းပြီးနောက်လိင်အင်္ဂါသို့, ရှေ့တော်၌ထိုလိင်တံ၏သုတ်ရည်လွှတ်ထပ်ခါတလဲလဲ, သာကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမရှိခြင်းငှါ၎င်း,
2 ။ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုကြောင့်သိသိသာသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်လူ့အတားအဆီးတွေ (PE);
3 ။ ညံ့ဖျင်းသောသုတ်ရည်လွှတ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း။
Dapoxetine Hydrochloride တက်ဘလက်ဟာအပေါ်ယံပိုင်း၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်ပိတ်-အဖြူဖြစ်သောမီးခိုးရောင်ရုပ်ရှင်-coated တက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း: Dapoxetine Hydrochloride ။
Dapoxetine HCL အမှုန့်ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
1 ။ 2D ဖွဲ့စည်းပုံ:
2 ။ 3D ညီ:
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 305.421 g / mol
ပစ္စုပ္ပန်မှာ dapoxetine Hydrochloride တက်ဘလက်များနှင့်အတူအထီးအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှုမတိကျတဲ့စည်းမျဉ်းလည်းမရှိ။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအဘို့အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့စည်းမျဉ်းရှိပါသည်။ ဒါဟာအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ကုသမှုအခက်အခဲကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါဆေးဝါးအချိန်ယေဘူယျမရနိုင်ပါ။ လူနာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေအရသိရသည်ဆေးယူနိုင်အောင်သို့သော်မူးယစ်ဆေး, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
: Dapoxetine အဓိကအားအပါအဝင် 18 မှတစ်နှစ် 64 ၏ကုသမှုများအတွက်အောက်ပါအခြေအနေများအပေါငျးတို့သတွေ့ဆုံရန်တဲ့သူဟောင်းအထီးအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် (PE) လူနာရည်ရွယ်
1 ။ လိင်တံစဉ်အတွင်း, ဒါမှမဟုတ်မကြာမီလိင်အင်္ဂါသို့သွင်းပြီးနောက်, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမပြုမီရှေ့တော်၌, အနည်းဆုံးသေးငယ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲသုတ်ရည်လွှတ်ပါ၏
3 ။ ညံ့ဖျင်းသောသုတ်ရည်လွှတ်ထိန်းချုပ်။
Dapoxetine ပြီးသားအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှုအပေါ်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းအဖြစ်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးဆေးဝါးအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ dapoxetine, serotonin ယူပြီးသည့်အခါဦးနှောက်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာ, လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် serotonin ဦးနှောက်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုလောင်ကျွမ်းသို့မဟုတ်အပန်းဖြေအကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုဖြစ်စေသောပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ သုတ်ရည်လွှတ်အချိန်ကိုက်နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်နိုင်အောင်, အဆိုပါတင်းမာမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဖြေရှင်းနေကြသည် adrenaline ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
Dapoxetine Hydrochloride ထိရောက်စွာ 5-HT reuptake တားစီးနှင့် 5-HT Transporter ဟန့်တားခြင်းအားဖြင့် Synaptic ကွဲအတွက် 5-HT များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ လေ့လာရေး dapoxetine ဗဟိုသုတ်ရည်လွှတ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, နှင့်ကုမ္ပဏီကြီးဆဲလ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နျူကလိယတစ်ဦးမရှိမဖြစ်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ dapoxetine များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အခါ, monoamine ပရိုတိန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်က inhibited ခံရနိုင်ပြီး, dopamine ၏ reuptake လည်း inhibited ဖြစ်ပါတယ်။ Dapoxetine pudendal မော်တာအာရုံခံဆဲလျတုံ့ပြန်မှုများ၏အောင်းနေချိန်တိုးပွါးခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
ဘယ်လောက်ကြာကထိရောက်သောဖြစ် dapoxetine Hydrochloride တက်ဘလက်များအတွက်ကြာယေဘူယျမပေးပါ။ ကုသမှုအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ကုသမှု၏အခက်အခဲကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ဆေးဝါးယူပြီး၏အချိန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှုအတွက် dapoxetine ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားအားဖြင့်ဆဲလ် synapses မီနှင့်အပြီး receptors အပေါ်သရုပ်ဆောင် neurotransmitters ၏အလားအလာခြားနားချက်ထိခိုက်, အာရုံခံခြင်းဖြင့် serotonin ၏ reabsorption ၏တားစီးနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ဦးနှောက်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖိနှိပ်ကြောင့် serotonin များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားလာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Dapoxetine အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
serotonin ပုံမှန်အားဖြင့် synapses ထံမှ reabsorbed, ဒါပေမယ့် dapoxetine တာက reabsorption ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့် serotonin ဖိနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖိနှိပ်ကြောင့် serotonin များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားလာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ serotonin အပျော်အပါး, စိုးရိမ်စိတ်, သင်ဦးနှောက်အာရုံကြောအခါထွက်လာ adrenaline ချဲ့ထွင်ကြောင်း dopamine ဖိနှိပ်, ဒါကြောင့်သင် ejaculate.Dapoxetine ဖို့အချိန်ရှည်နိုင်ပါတယ်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည် ဦးနှောက်။
serotonin အပျော်အပါး, စိုးရိမ်စိတ်, သင်ဦးနှောက်အာရုံကြောအခါထွက်လာ adrenaline ချဲ့ထွင်ကြောင်း dopamine ဖိနှိပ်, ဒါကြောင့်သင် ejaculate ဖို့အချိန်ရှည်နိုင်ပါတယ်။
လူ့သုတ်ရည်လွှတ်အဓိကအားဖြင့်စာနာအာရုံကြောစနစ်ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း၏တုံ့ပြန်မှုလမ်းကြောင်းအစပိုင်းတွင်အများအပြားဟာဦးနှောက်အရေးပါ (medial preoptic နျူကလိယနှင့် hypoventricular paraventricular နျူကလိယ) ကထိခိုက်သော brainstem, ကကမကထပြုခဲ့သောကျောရိုးတုံ့ပြန်မှုစင်တာကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် dapoxetine လျှင်မြန်စွာစုပ်ယူသည်နှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1-2 နာရီအကြာတွင်အများဆုံးပလာစမာအာရုံစူးစိုက်မှု (Cmax) ရောက်ရှိ။ အဆိုပါအကြွင်းမဲ့အာဏာ bioavailability 42% (အကွာအဝေး 15-176%) ဖြစ်ပါတယ်။ 30 မီလီဂရမ်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းပြည်နယ်အတွက် dapoxetine ၏ 60 မီလီဂရမ်၏တစ်ခုတည်းပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အထွတ်အထိပ်ပလာစမာပြင်းအား (297 ng / ml နှင့် 498 ng / ml ကိုအသီးသီး) အသီးသီး 1.01 နှင့် 1.27 နာရီအကြာတွင်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ high-အဆီအစားအစာများ၏စားသုံးမိပါအတန်အသင့် dapoxetine ၏ Cmax (10%) လျှော့ချရန်နှင့်အတန်အသင့်ကိုလည်းအနည်းငယ် dapoxetine ၏အထွတ်အထိပ်အာရုံစူးစိုက်မှု delay လုပ်ခြင်းနေစဉ် AUC (12%) ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်; သို့သော်မြင့်မားတဲ့အဆီစားသုံးမှုအစားအသောက်စုပ်ယူ၏အတိုင်းအတာမထိခိုက်ပါဘူး။ ဤပြောင်းလဲအဘယ်သူအားမျှလက်တွေ့အရေးပါမှုရှိသည်။ Bentley နှင့်အတူသို့မဟုတ်အစားအစာမပါဘဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးခြင်းအားဖြင့်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်အစောပိုင်းခန့်မှန်း, အလယ်တန်းနှင့် dapoxetine ၏ terminal ကိုဝက်ဘဝတွေကိုအသီးသီး 0.10, 2.19 နှင့် 19.3 နာရီဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါပြန်ထွက်သွားသည် dapoxetine ၏ metabolites အဓိကအားဖြင့် conjugation အခြေအနေမှာဆီးခွငျးအားဖွငျ့ရှင်းလင်းနေကြသည်။ အဘယ်သူမျှမတက်ကြွသောပစ္စည်းဥစ္စာဆီးထဲမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်။ Dapoxetine လျှင်မြန်စွာရှင်းလင်းနှင့်အထောက်အထားအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ထိုအသွေးကိုအာရုံစူးစိုက်မှု 24 နာရီ (ထိုအထွတ်အထိပ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ထက်နည်း 5%) ၏အောက်ခြေဖြစ်ပါတယ်။ dapoxetine ၏နေ့စဉ်ထိုးအလွန်သေးငယ်သည်။ ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေး terminal ကိုဝက်ဘဝကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 19 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ desmethyl dapoxetine ၏ဝက်ဘဝ dapoxetine ၏ဆင်တူသည်။
Dapoxetine Hydrochloride တက်ဘလက်များသုတ်ရည်လွှတ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုထိရောက်စွာမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်; သိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုကျေနပ်အားရမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်; ထိထိရောက်ရောက်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်ရှည်။
ဆေးဝါးသုံးနေစဉ်လူနာကိုလည်းအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ခံစားချက်ညှိ, ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီး, ဆင်ခြင်တုံတရားအစားအစာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းကိုခိုင်ခံ့စေနေ့စဉ်ပြေးအကြားဆက်သွယ်ရေးကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်အပတ်တိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အချို့သောအသေးစားအစီအမံကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာအစဘောလုံးကစားခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှသက်သာရာရစေရန်ဘတ်စကက်ဘောကစားရန်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။
dapoxetine Hydrochloride ဆေးပြားများ၏သောက်သုံးသောပါးစပ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်တက်ဘလက်များနဂိုအတိုင်းမျိုရပါမည်; လူနာဆေးဘို့ရေကိုအနည်းဆုံးတဦးတည်းအပြည့်အဝသောက်သောခွက်ကိုယူရန်အကြံပြု; လူနာထိုကဲ့သို့သော syncope သို့မဟုတ်မူးဝြေခင်းအဖြစ် prodromal လက္ခဏာတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများအတွက်လူနာအားလုံးအကြံပြု dapoxetine Hydrochloride တက်ဘလက်၏ပမာဏ (18 ဟောင်းနှစ်ပေါင်း 64 မှ) 30 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝမရောက်မီ 1 နာရီ3အကြောင်းကိုယူခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု 30mg ယူပြီးပြီးနောက်စိတ်ကျေနပ်စရာမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှစ်သက်ဖွယ်သောအကွာအဝေးအတွင်းနေဆဲလျှင်, သောက်သုံးသောအများဆုံးအကြံပြုထိုး၏ 60mg မှတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
အဆိုပါအကြံပြုအများဆုံးထိုးတိုင်း 24 နာရီကိုအသုံးပြုသည်။
(ကျော် 65 အသက်နှင့်) သက်ကြီးရွယ်အိုများဒီထုတ်ကုန် 65 နှစ်အတွင်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသောလူအစုအဝေးကျော်လူနာများကိုအတွက်လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှု, ဒီလူဦးရေအတွက်အသုံးပြုရန်ဒီထုတ်ကုန်ပေါ်မှဒေတာအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းအလွန်ပျော့နှင့်အတူလူနာအတွက်ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ရသေး ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အတူကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းသို့မဟုတ်လူနာတွေဒီထုတ်ကုန်ယူပြီးသည့်အခါဆေးထိုးကိုထိန်းညှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သတိနဲ့ယူသင့်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်ပြင်းထန်ကျောက်ကပ်ဒဏ်ရာနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
ဒီထုတ်ကုန်အောက်ပါအခြေအနေများအပေါငျးတို့သခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသူကို 18 နှင့် 64 ၏အသက်အရွယ်အကြားအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် (PE) နဲ့အထီးလူနာကုသမှုများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်: ကလိင်အင်္ဂါသို့ထည့်သွင်းသည်အထိလိင်တံကာလအတွင်းသို့မဟုတ်မကြာမီသွင်းပြီးနောက်, နှင့်မှီ, ဆက်ပြီး လိင်ဆန္ဒပြည့်မှသာကြောင့်အနည်းဆုံးယားယံခြင်း, အောင်မြင်နေသည်။ သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲသုတ်ရည်လွှတ်; နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် (PE) များကြောင့်လူ့အတားအဆီးသိသိသာသာ; သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်သုတ်ရည်လွှတ်ထိန်းချုပ်။
(1) အရွယ်ရောက်အမျိုးသားများ (18 ဟောင်းနှစ်ပေါင်း 64 မှ)
30 တစ်ဦးပထမဦးဆုံးထိုးအကြံပြုလူနာအားလုံး mg နှင့်လိင်မတိုင်မီနာရီ 1 မှ3အကြောင်းကိုယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု 30mg ယူပြီးပြီးနောက်စိတ်ကျေနပ်စရာမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှစ်သက်ဖွယ်သောအကွာအဝေးအတွင်းနေဆဲလျှင်, သောက်သုံးသောအများဆုံးအကြံပြုထိုး၏ 60mg မှတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါအကြံပြုအများဆုံးထိုးတိုင်း 24 နာရီကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီထုတ်ကုန်တစ်မုန့်ညက်မတိုင်မီသို့မဟုတ်အပြီးခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့ဒီထုတ်ကုန်ကိုရွေးကောက်ပြီး အကယ်. သူသည်အန္တရာယ်နှင့်မူးယစ်ဆေးအသုံးပြုသည်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံး4ရက်သတ္တပတ်များအတွက်စိတ်ရှည်၏အစီရင်ခံစာအကျိုးအတွက်အကဲဖြတ်ရန်, သို့မဟုတ်6အချိန်ကုသမှုထိုးသုံးပြီးပြီးနောက်လူနာရဲ့အန္တရာယ်-အကျိုးအတွက်ချိန်ခွင်လျှာအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်သင့်တယ် ထုတ်ကုန်သုံးပြီးဆက်လက်ရှိမရှိ။
(2) ကသက်ကြီးရွယ်အို (65 နှစ်နှင့်အထက်)
သုတေသနသေးကျော် 65 နှင့်အသက်လူနာအတွက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်မထားပါဘူး။ ဒီအတှကျအဓိကအကြောင်းပြချက်ကဒီလူဦးရေအတွက်ဒီထုတ်ကုန်များအသုံးပြုမှုအပေါ်ဒေတာအလွန့်အလွန်ကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထုတ်ကုန် 18 ၏နှစ်အောက်ကလူအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။
တစ်ကြိမ်မှာတက်ဘလက်အသတ်မရှိယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါး၌မိမိတို့နာမကျန်းပေါ် မူတည်. ပြောသည်နှင့်လုံခြုံရေးမူးယစ်ဆေးဝါးမလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးအဘို့အစီစဉ်ပေး, ဒီဆေးဝါးပြည့်စုံစစ်ဆေးရေး system ကိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစွာမတိုင်မီအသုံးမပြုခင်လက်ဖက်ရည်သောက်ရန် သာ. ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်မတရားဖမ်းဆီးမတိုး သငျသညျကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ကြိမ်နှုန်းဆရာဝန်၏အစီအစဉ်များနှင့်အရှက်ကိုလိုက်နာရမည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor ၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲလက္ခဏာတွေထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောပျို့ခြင်းနှင့်အန်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, တုန်ခါ, မူးဝြေခင်းနှင့် tachycardia အဖြစ် lethargy, အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ် serotonin-mediated ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်။ လိုအပ်အဖြစ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, စံထောက်ခံမှုအတိုင်းအတာကိုယူရပါမည်။ ဒီထုတ်ကုန်ရန်မတိကျတဲ့ဖယျရှားဖို့လက်ရှိရှိပါတယ်။
Dapoxetine HCL ကွိုတငျကာကှယျမှုမြား
1 ။ အထွေထွေကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ။ Dapoxetine သာအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အတူအထီးလူနာအတွက်အသုံးပြုသည်။ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဘယ်သူသည်အမျိုးသားများတွင် Dapoxetine များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒီလူဦးရေအတွက်သုတ်ရည်လွှတ် delay လုပ်ခြင်းအပေါ် Dapoxetine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမဒေတာရှိပါတယ်။ ဒါဟာသက်ရောက်မှုဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမသိရများနှင့်လေးနက်သောကွောငျ့လူနာတစ်ချိန်တည်းမှာ Beverly နှင့် "ဖျော်ဖြေရေးမူးယစ်ဆေးဝါးများ" မယူသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
2 ။ လူနာကယူနေစဉ်အတွင်းစိတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ကိုမယူအကြံပြုပါသည်။
3 ။ Dapoxetine ယူပြီးတဲ့အခါမှာအရက်ကိုယူပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ။
4 ။ Dapoxetine syncope သို့မဟုတ်မူးဝြေခင်းဖြစ်ပေါ်စေကိုသုံးပါ
5 ။ ဒါ့အပြင် erythromycin, clarithromycin, fluconazole, verapamil နှင့် diltiazem တူသောအလယ်အလတ် cytochrome P450 3A4 inhibitors ယူပါ။
6 ။ မီလီဂရမ် 450 မှဆေးထိုးတိုးပွားလာသည့်အခါဤအတိုးမြှင့်ထိတွေ့မှုဆီသို့ဦးတည်စေခြင်းငှါကဲ့သို့အားနည်းပါသည်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့အားကောင်းတဲ့ cytochrome P2 6D450 inhibitor သို့မဟုတ်လူသိများ cytochrome P2 6D60 လူနာများကိုယူနောက်ဆုံးမှာပိုမိုမြင့်မားထိုး-မှီခိုဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပြင်းထန်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသော, သတိဖြစ်သင့်သည်။
7 ။ အကျိုးရှိသောတစ်ချိန်တည်းမှာ, အထက်ဖော်ပြပါရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်အတူမည်သည့်လူနာ Dapoxetine နှင့်အတူရပ်စဲထားရမည်, hypomanic သို့မဟုတ်စိတ်ကြွရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်အတူကိုနောက်ကောက် / လူနာများအတွက်အသုံးပြုမရသင့်တယ်။
8 ။ ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ Value ကိုတံခါးခုံကိုလျှော့ချစေခြင်းငှါသောကြောင့်, သိမ်းယူမှုနှင့်အတူမည်သည့်လူနာရပ်စဲထားရမည်နှင့်မတည်မငြိမ်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာ Dapoxetine သုံးပြီးရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
9 ။ Dapoxetine 18 ၏နှစ်အောက်လူမသုံးသင့်ပါတယ်။
10 ။ ပြင်းထန်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုနှင့်အတူလူနာသည်မထောက်ခံပါ, ပျော့သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းနှင့်အတူလူနာသတိနဲ့အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ အခြားအရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors ကဲ့သို့ပင် Dapoxetine ၏အသုံးပြုမှုကိုတချို့မျက်စိတုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျောင်းသား dilation နှင့်မျက်စိနာကျင်ကိုက်ခဲ။ ထောင့်-ပိတ်သိမ်းရေတိမ်၏မြင့်မားသော intraocular ဖိအားသို့မဟုတ်အန္တရာယ်နှင့်အတူလူနာသတိနဲ့အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
တားမြစ်ထားသော Dapoxetine HCL အမှုန့်
1 ။ Dapoxetine dapoxetine Hydrochloride သို့မဟုတ်မည်သည့် excipients မှမတည့်ဖြစ်လူသိများလူနာတွေအတွက်တားမြစ်ထားသည်။
2 ။ Dapoxetine [ဥပမာနှလုံးပျက်ကွက် (NYHA II ကို-IV), အမြဲတမ်း pacemaker ကုထုံး (တန်း2သို့မဟုတ်3atrioventricular ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့မဟုတ်နေမကောင်းအကှေ့ syndrome ရောဂါ) နဲ့မျှပုံမှန်မဟုတ်သော conduction, သိသာ myocardial ischemia နှင့် valvular ရောဂါ] နှလုံးထဲမှာသိသာရောဂါဗေဒအခြေအနေများနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်တားမြစ်ထားသည်
3 ။ Dapoxetine မ monoamine oxidase inhibitors ၏ကုသမှုရပ်တန့်လိုက်ပြီးနောက်ဒါဟာ 14 ရက်အတွင်းအတူတကွမသုံးသင့်ပေ) monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) နှင့်အတူ။ အလားတူပင် monoamine oxidase inhibitors (မူးယစ်ဆေး interaction ကကိုကြည့်ပါ) Bili ၏ပြတ်တောက်၏7ရက်အတွင်းအသုံးမပြုသင့်ပါတယ်။
4 ။ Dapoxetine မ thioridazine နှင့်အတူမဟုတ်သလို thiodazine ကုသမှုရပ်တန့်ပြီးနောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရက်အတွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ အလားတူပင် thioridazine (မူးယစ်ဆေးအပြန်အလှန်အပိုင်းကိုကြည့်ပါ) Dapoxetine ၏ပြတ်တောက်ပြီးနောက်7ရက်အတွင်းယူမရသင့်ပါတယ်။
5 ။ Dapoxetine ထိုကဲ့သို့သော nave, telithromycin, nefazodone, naffenavir နှင့် atazanavir ကဲ့သို့ခိုင်မာသော cytochrome P450 3A4 inhibitors တွေနဲ့လူနာတွေ saquin, ritonavir, ketoconazole, itraconazole တာကနေပိတ်ပင်ထားသည်။
6 ။ Dapoxetine အလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောအသည်းဒဏ်ရာနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်တားမြစ်သည်။
Dapoxetine HCL အမှုန့်နိဂုံး
dapoxetine Hydrochloride တက်ဘလက်များအသုံးပြုတဲ့အခါကရောဂါ၏လက္ခဏာများပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပိုကောင်းတဲ့မူးယစ်ဆေးကိုဝတျပွုနိုငျသောဆေးသမား၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်။
ဘယ်လိုဝယ်ခြင်းငှါ Dapoxetine Hydrochloride အမှုန့် (129938-20-1) AASraw ထံမှ
စုံစမ်းရေးကော်မရှင်စနစ်, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း Skype
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် (CSR) ။
JinYang အယ်လကာလီ (Jinyang အခြေစိုက်စခန်း) အမှုန့်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.005ထဲက